zvakajairika bvunzo otomatiki zvisizvo
Kuru Kushandisa Michina Yakajairika Bvunzo Yekuzvishandura Manyepo
Yakajairika Bvunzo Yekuzvishandura Manyepo
Munyaya ino, isu tichaongorora zvimwe zvakajairika bvunzo otomatiki zvisizvo uye kuti izvi zvinodzivirira sei masangano kubva mukubudirira mune bvunzo otomatiki.
Izvo hazvina kuoma kufungidzira mabhenefiti ekuva otomatiki kuyedza padhuze nekugadzirwa kwechigadzirwa - kukurumidza kuburitswa, kuwedzerwa bvunzo kuyedzwa, kazhinji bvunzo kuurayiwa, mhinduro nekukurumidza kuchikwata chekusimudzira, kungodoma mashoma, zvakadaro masangano mazhinji haana kufamba kana inodzivirira mukudyara muyedzo otomatiki.
Kwayedza Automation Manyepo
Zvichida chinhu chakaomesesa uye chakaomesesa cheyese bvunzo yekushandisa otomatiki kunzwisisa kukanganisika kwekuyedza otomatiki uye nekumisikidza zvinangwa zvechokwadi nezvinotarisirwa kuti zvidzivise zvinoodza moyo. Tine izvozvo mupfungwa, ngatione kumwe kusanzwisisana kwakajairika uye ngano nezve test automation:
Kuzviongorora Kwayedza kuri Nani pane Kwayedza Kuedza
Kutaura nezveMichael Bolton's blog post Kuedza vs. Kutarisa , otomatiki kuyedza hakusi kunyatso kuyedza. Iko kutarisa kwechokwadi. Kana isu tine nzwisiso yeiyo system, isu tinokwanisa kumanikidza iko kunzwisisana mumhando dzekutarisa uyezve nekumhanyisa otomatiki macheki, tinosimbisa kunzwisisa kwedu. Kuedza, kune rumwe rutivi, chiitiko chekuferefeta patinovavarira kuwana ruzivo rutsva nezve iyo system iri kuyedzwa kuburikidza nekutsvaga.
Kuedzwa kunoda kuti munhu aite mutongo wakaringana pamusoro pekushandisa kwesisitimu. Tinogona kuona anomalies apo isu tanga tisingafungire. Hatifanire kuregeredza kune imwe kana imwe, sezvo nzira mbiri idzi dzichidikanwa kuti tinzwisise hunhu hwechikumbiro.
Kubudirira 100% Yekuzviongorora Kwayedza
Sezvo pasina iyo inoshanda nzira yekuzadzisa 100% bvunzo kufukidzwa (nekuda kwekusingaperi inogoneka mvumo), zvakafanana zvinoshanda pakuedza otomatiki. Tinogona kuwedzera bvunzo kufukidza nekumhanyisa otomatiki bvunzo nedata rakawanda, mamwe marongero, achifukidza akasiyana siyana masisitimu anoshanda, mabhurawuza, asi kuzadzisa 100% ichiri chinangwa chisingaitiki. Kana zvasvika pakuyedza otomatiki, mimwe miedzo haireve kuti zviri nani kunaka kana kuvimba kwakasimba. Izvo zvese zvinoenderana nekuti yakanaka sei bvunzo yakagadzirirwa. Panzvimbo pekuvavarira kufukidzwa zvizere pachinzvimbo, tarisa pane yakakosha nzvimbo yekushanda yakakosha kubhizinesi.
Paunenge uchiita bvunzo otomatiki mhinduro, kune zvimwe zvinoenderana zviitiko zvekuvandudza pane kungo nyora bvunzo kesi. Kazhinji furemu inoda kuvandudzwa iyo inogona kutsigira bespoke mashandiro ayo anobatsira uye anoreva bhizinesi, senge bvunzo kesi kusarudzwa, kuripota, data-inotyairwa, nezvimwe.
Iko kuvandudzwa kwesystem chirongwa chega uye chinoda vane hunyanzvi vanogadzira uye zvinotora nguva kuvaka. Kunyangwe kana hwaro hwakazara hwekushanda hwavepo, kunyora otomatiki cheki pakutanga kunotora nguva yakareba pane kuita bvunzo imwechete pamurume. Naizvozvo kana isu tichida mhinduro nekukurumidza pane iyo nyowani ficha iyo ichangobva kugadziridzwa, kuitarisa pamurume kunowanzo kukurumidza kupfuura kushandisa automating bvunzo. Nekudaro, iyo ROI inodzoserwa mukufamba kwenguva apo isu patinofanirwa kuitisa bvunzo dzakafanana nguva nenguva.
Yakakwira Chiyero cheKutadza Kuonekwa kuburikidza neAkagadziriswa maCheki
Kunyangwe vazhinji vevatengesi-vanopihwa uye kumba-yakabikwa bvunzo otomatiki mhinduro dzakanyanyisa uye dzichikwanisa kwazvo pakuita mashandiro akaomarara, ivo havazombokwanisa kukwikwidza nehungwaru hweye muyedzo wevanhu anogona kuona zvisakamboitika zvisingatarisirwi mukushandisa uku uchiongorora kana kuita seti yemabvunzo akanyorwa kupokana nesystem iri pasi pekuedzwa. Zvinotoshamisa ndezvokuti vanhu vanotarisira kuyedzwa otomatiki kuti vawane akawanda emabhugi nekuda kwekufungidzirwa kuti kwakawedzera bvunzo, asi muchokwadi, izvi handizvo.
Chokwadi, otomatiki bvunzo dzakanaka pakubata kudzokorodza nyaya - mushure mekunge chimwe chinhu chitsva chawedzerwa kune iripo kodhi base, tinofanirwa kuona kuti hatina kutyora mashandiro azvino uye isu tinoda ruzivo irworwo nekukurumidza - asi, huwandu hwezvinhu zvekudzosera, muzviitiko zvakawanda, zvinowanzove zvakaderera pane mashandiro matsva ari kugadzirwa.
Imwe pfungwa yekuisa mundangariro ndeyekuti otomatiki macheki anongotarisa izvo zvavakarongedzerwa kuti vatarise nemunhu akanyora script. Zvinyorwa zvacho zvakanaka semunhu akazvinyora. Zvese zvoga zvichemo zvinogona kupfuura nemufaro asi zvikanganiso zvakakura zvinogona kuenda zvisingaonekwe izvo zvinogona kupa fungidziro isiriyo yehunhu hwechigadzirwa. Mukukosha, kutarisa kunogona kuratidza kuvepo kwekuremara, asi hakugone kuratidza kusavapo kwavo.
Isu Tinongoda Chikwata Cheyedzo Yekushandisa
Saka, kana mukana wekuwana hurema wakanyanya mukuyedza maficha, nei isu tisiri kumhanyisa bvunzo yedu yekuzvidzivirira kupokana nemashandiro matsva sezvaari kugadziridzwa? Zvakanaka, izvi zvakada kudaro kune zvikwata zvinodzidzira TDD .
Vagadziri vacho vanonyora bvunzo yeyuniti kutanga, vatarise ichikundikana uye vobva vanyora kodhi yakaringana kuti yuniti bvunzo ipfuure uye kutenderera kwacho kunodzokororwa kudzamara basa ratarisirwa raendeswa. Mukukosha, izvi otomatiki zviyero zveyuniti zviri kutarisa mashandiro matsva uye nekufamba kwenguva vanogadzira iyo unit regression pack iyo inoitwa yakadzokororwa sekushanda kwatsva kununurwa.
Asi, pane bakoat kune izvi. Ipo TDD ichikurudzirwa kwazvo uye iri yakasimba tsika yekuvandudza mukuvaka mhando kubva munzvimbo kumusoro, zviyero zveyuniti zvakangonaka pakutsvaga programmer zvikanganiso, kwete kukundikana. Pane chinhu chakakura kwazvo chekuyedza chinoitika kana zvese zvinhu zvasungwa pamwechete uye voita system.
Muchokwadi, mazhinji masangano ane iwo mazhinji eawo otomatiki macheki pane iyo system UI yakaturikidzana. Nekudaro, kunyora zvinyorwa otomatiki cheki yeUI kana system, nepo maficha ari kuvandudzwa ibasa rinotyisa, sezvo mashandiro matsva anowanzo kuve asina kugadzikana (zvichienderana neshanduko zhinji) panguva yekusimudzira. Zvakare, iko kunotarisirwa mashandiro kunogona kusazivikanwa kusvika gare gare, saka kushandisa nguva kugadzirisa iko kuchinjika mashandiro hakukurudzirwe.
Isu tinongoda System UI Automation
Kune hutsika mukumhanya otomatiki macheki kuUI uye system nhanho. Tinosvika pakuona zvinosangana nemushandisi kana achitaurirana nechishandiso; tinogona kuyedza kupera-kusvika-kumagumo kuyerera uye 3rdmubatanidzwa wepati patakatadza kuyedza neimwe nzira; isu tinogona zvakare demo bvunzo kune vatengi uye end-vashandisi kuitira kuti vagone kuwana kunzwa kwekuedzwa kufukidzwa. Nekudaro, kuvimba chete pane otomatiki cheki pane iyo UI dura ine ayo matambudziko.
UI iri kuramba ichichinja kusimudzira ekuona dhizaini uye kushandisika uye kuve nema otomatiki macheki kutadza nekuda kweiyo UI shanduko uye kwete shanduko mukushanda kunogona kupa kunyepa kwekunyepedzera kwenzvimbo yekushandisa.
UI otomatiki macheki ari zvakare anononoka zvakanyanya mukumhanyisa kwekuitwa kupfuura pane yeyuniti kana API dura uye nekuda kweizvi, mhinduro loop kuchikwata inononoka. Zvinogona kutora maawa mashoma chishuwo chisati chaonekwa uye choshumwa kumashure kune vanogadzira. Uye kana chimwe chinhu chikatadza kuenda, iyo mudzi wechikonzero ongororo inotora nguva yakareba nekuti haisi nyore kuoneka kuti pane bug.
Kunzwisisa mamiriro echiyero chega chega uye nepi pakatarisana nemuedzo unofanirwa kuita otomatiki kwakakosha. Bvunzo otomatiki inofanirwa kuve chikamu cheichi chiitiko chekuvandudza, saka timu yese inoona nezveyedzo otomatiki, nevakagadziri vachinyora vachiita zviyero zveyuniti, Vagadziri veSoftware mukuyedza kunyora vachiita nekuchengetedza bvunzo dzekubvuma kuAPI uye / kana UI.
Kurasika Kutenda uye Kuvimba muTest Automation
Iyi yekupedzisira haisi ngano nezve test automation, asi divi mhedzisiro kana test otomatiki ikatadza. Unopedza maawa mazhinji uchigadzira yakakwana test automation solution, uchishandisa maturusi akanakisa uye nemaitiro akanakisa, asi kana macheki akazvionera asingabatsire timu haina kukosha.
Kana timu isina kuoneka kana ruzivo pane izvo zvoga zvoitwa uye zvirikuitwa, ivo vanogona kusunungura nekutya kusazivikanwa kana kuteedzera kwavo kudzokorodza kuyedza kuyedza. Kana iwo otomatiki macheki ari asina kujeka, anononoka, achipa mhedzisiro mhedzisiro saka inogona kuvhiringidza timu kupfuura kupa chengetedzo mambure uye chivimbo chinosimbisa.
Usatya kubvisa otomatiki macheki ayo anogara achitadza kana kupa zvisingaenderane mhedzisiro. Panzvimbo iyoyo, tarisa yakachena uye yakavimbika suite yemayedzo ayo anogona kupa chaiyo zviratidzo zvehutano hwechikumbiro.
Kwayedza Yekushandisa ndeyenguva refu yekudyara. Zvinotora nguva uye hunyanzvi mukugadzira nekuchengetedza bvunzo otomatiki masystem uye otomatiki zvinyorwa. Kwayedza automation haisi imwechete-yekuedza kuyedza kwaunounza mhinduro uye wobva warega uchimhanya. Inoda kugara ichiongororwa uye kugadzirisa.
Panzvimbo pekuvavarira kutsiva manyorerwo eQAs kana kutarisira iwo ma automated cheki kuti vawane kuwanda kwehurema, isu panzvimbo pezvo tinogamuchira zvakwakanakira izvo zvinounza kuchikwata, sekusunungura nguva yeQA yekumwe kuongorora kwekutsvagisa uko mikana yekuburitsa hurema inowedzerwa, kana kushandisa otomatiki zvinyorwa zvekugadzira data rekuyedza iro rinogona kushandiswa pakuongorora kwemanyorerwo.
Kunzwisisa kutadza uye nekumisikidza zvinotarisirwa zvakakosha mukukunda idzi ngano dzekuyedza kushandisa.
ita ma iphones anochinja ekuchengetedza masikati
t nhare mbozha dzevakuru
AT & T inokurudzira vatengi kutenga mafoni matsva kuti varambe vachishandisa network yayo
Waizviziva here kuti Samsung yakavhura nharembozha yekutanga-ine simba?
-Kutanga-kuraira kudiwa kweiyo iPhone 12 Pro inomanikidza shanduko mukutakura nguva; rumwe ruvara ndirwo runopisa
Yakanakisa T-Mobile Cyber ​​Muvhuro madhiri, yemahara tambo uye kuronga rebates kudzoka